Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar | MOHT Official Website
FOR TOURIST COMPLAINTS
Ph: +95-67- 406458, 406061, 406466 +95-1-371286, 252859
For your convenience, please keep in mind this logo
Visitors’ Guide Books
INFORMATION FOR TOURIST
Social Medial and App
Select City NameAungpan/ Pin laungBaganBagoBamawChaung ThaDaweiGangawHainggyi KyunHo PanHpa KantHpa-anKalawKalayKanpatlatKathaKawthaungKyaikhtoKyaingtonKyauk MaeKyauk SalKyaukpadaungKyaukphyuLashioLatt Pa TanLoikawMagweMandalayMaubinMawlamyaingMeikhtilaMin DatMinbuMoe NyinMogokMonywaMuseMyauk OoMyawaddyMyeikMyingyanMyitkyinarNam Sam (Loilin)Naung HkioNaypyitawNgwe SaungNyaung Lay PinNyaung Shwe (Inle) / Shwe NyaungPakhokuPatheinPhe KhonePhyar PonPindayaPutaoPyaw BwePyayPyinmanaPyinOoLwinSagaingSat-SalShwe BoShwe Thaung YanSint KaingSittweTachileikTanintharyiTant YanTaung Twin GyiTaungooTaungyiTha Yar WaddyTha-HtoneThan Phyu ZayatThandwe (Ngapali)TharziThipawYa Mae` ThinYangonYayYay Nan Chaung
Find Tour Company
Select City NameAyeyarwadyBagoKachinMagweMandalayRakhineShanYangon
Select Tour TypeInbound TourOutbound Tour
Find Tour Guide
တာချီလိတ်နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ၀င်/ ထွက် လည်ပတ်လျက်ရှိ
by MO HT | Mar 22, 2019 | News |0Comments
နေပြည်တော်၊ မတ်လ(၂၂) ရက် နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဧည့်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေမြေတောတောင် သဘာဝအလှများ၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်သည့်နေရာများ ၊ တိုင်းရင်းသားတို့၏ မတူကွဲပြားသည့် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက်များ၊ လူနေမှုဘ၀ပုံစံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာ...
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိ
by MO HT | Mar 21, 2019 | News |0Comments
နေပြည်တော်၊ မတ်လ (၂၁) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံတကာမှခရီးသွားဧည့်သည်များ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ...
“ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ကလေးသူငယ်များဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရေး ကာကွယ် မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ”ကျင်းပ
by MO HT | Mar 19, 2019 | News |0Comments
နေပြည်တော်၊မတ်လ (၁၉) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှဦးဆောင်၍ “ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ကလေး သူငယ်များဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ” ကို ၁၈-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်ဝ၉:ဝဝနာရီတွင် မန္တလေးမြို့ရှိ Hotel Mandalay တွင်...
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ မတ်လ (၁၉) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံတကာမှခရီးသွားဧည့်သည်များ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ...
စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း(၃)မျိုး သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၉ ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှု၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(မုံရွာ)ရုံးခွဲနှင့် ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(စစ်ကိုင်းဇုန်)တို့မှ...
ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ ဗီဇာလျှောက်ထားရန်အတွက် VFS Global မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း
by MO HT | Mar 18, 2019 | News |0Comments
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျာမနီသံရုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဗီဇာလျှောက်ထားမှုအား ၁-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိVFS Global ရုံးတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၁-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ နေပြည်တော်ရှိVFS Globalရုံးတွင်...
ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် Tourism Web Portal လုပ်ငန်းကိစ္စ ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၈ ရက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် Tourism Web Portal နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ကို (၁၅.၃.၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပုဂံမြို့ရှိ Royal Palace Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ...
Tourism News Links
Tourism law in parliament
10 hotels to rise in Myeik archipelago
Myanmar strives to promote role of tourism development
Cambodia, Myanmar moot plan to promote ancient temples
Ministry to boost ecotourism this fiscal year
Myanmar is Long time ago, old indian had known Myanmar as ‘Byama’. The earliest word of Myanmar came out in the area of Bagan especially in Taungoo Ni stone-inscription. In the 15th century, ‘Burma’ is firstly named by Portuguese who came to trade. Throughout the time of British’s colony, English used ‘Burma’ for Burma ethnicity. Burma is an ethnicity among national races. The word of Myanmar embraces the national races of Kachin, Kayar, Kayin, Chin, Burma, Mon, Rakhine and Shan. It named Myanmar which refer all kinds of race that live together in the Republic of the Union of Myanmar in unity.
( From Myanmar Online Encyclopedia)
Association of Southeast Asia Nations
Association of Sou<<4R543W90-=98theast Asia Nations
Myanmar Hotelier Association
Yangon, at one time called Rangoon, was founded by King Alaungpaya on the site ofasmall settlement called Dagon when he conquered Lower Myanmar in 1755. The city is home to institutions such as the National Museum and Bogyoke Museum displaying …
Numerous traditions have been preserved in Bagan and its surrounding villages, including handicrafts such as beautiful lacquerware, basket weaving, sand art painting, woodcarving and bronze wares. If you cannot make it toaworkshop to witness these items being made,…
Mandalay was the last royal city before Myanmar was colonised by Britain in 1885. While the scale of King Mindon’s ambition for the walled citadel is clear from first glance, the whole magnificent palace complex was devastated during World War II. That said, …
Inlay Lake (also known as Inle Lake) isascenic highland lake in Shan State. It is easily accessible by plane from Yangon, Bagan or Mandalay to Heho airport. From there it isa35km journey by road to Nyaung Shwe, the main “marina” for pick-up by boat.
Useful Myanmar Phrases
Auspicious to you all
nei kaun: ue. la:
mingala nan ne khin: ba
kaun: tho: nya. nei khin: ba
Good night / Good Bye
kyei: zu: tin ba de
kyei: zu: amya: gyi: tin ba de
I cannot speak Myanmar
Myanmar lo matat’ bu:
khamya: na: le tha la:
May I takeaphotograph
da’ poun yai’ lo. ya. mala:
May I use the telephone?
te li hpon: thoun: lo. ya. ma. la:
Where is the restroom
ein tha be ma shi. tha le:
be lau’ le:
e: da ba le:
zei: mya: de
noun gya. thei: da paw.
twei. ya. da wan: tha ba de
kan kaun: ba zei
sel’ mashi ba ne.
thi: khan ba
ya ba de
hou’ ke khin bya.
hou’ ke shin.
da ge la:
ma hpyi’ nain bu:
hpyi’ nain ba de
I beg your pardon (male)
khin mya (?)
I beg your pardon (female)
ku nyi ba ya. zei
ke gya. ba oun:
hla. lai’ ta
I want to go..
…go thwa: gyin ba de
…be na: ma le:
be be cho:
nya be cho:
te. de. thwa: ba
dima ya’ ba
tha di: hta: ba
Be careful, don’t drive too fast
tha di: hta: ba: phyie: byei: maun:
be lau’ kya. tha le:
maan: ne. daw
ba saka: hma’ tain
ye: sa khan:
River Boat Jetty
thin: baw: zei’
e. yei’ tha
sa: thau’ hsain